InkampaniHub: Isoftware yeCRM yeShishini lakho elincinci | Martech Zone
InkampaniHub: Isoftware yeCRM yoShishino lwaKho oluncinci
NgoLwesine, Novemba 3, 2016 NgoMgqibelo, uJanuwari 14, 2017 Douglas Karr
Ngezakhelo kunye nezithintelo kuphuhliso lweqonga eliwisa, sibona amaqonga amaninzi abetha intengiso. InkampaniHub yinkampani encinci yeCRM elula kwaye ekwaziyo ukubiza amaxabiso ayaphuka ngoko ke kufuneka ufumane kuphela into oyifunayo.
Ngaphandle kokubonakala kwemibhobho yokuthengisa, iCRM esetyenziselwa ukuthengisa inika amandla okuzenzekelayo ekulandeleleni:
InkampaniHub ibonelela ngale nto kwaye inezinto zilandelayo:
Lawula yakho Iwebhu ukukhokela uguquko.
Unceda uku hlengisa ukuthengisa kwakho inkqubo.
Ukulandela umkhondo nge-imeyile kunye nokuqhafaza kwikhonkco inbox.
Iposi enkulu kunye yokulandelela Email.
Ulandelo oluzenzekelayo ingcebiso, ukuze ungaphoswa ngumkhokeli.
Unamandla Dashboard kunye neeNgxelo zesiNtu
Lawula Iingcaphuno kunye neMiyalelo kwaye uthumele ngqo iikowuti ezivela kwinkqubo.
Zama iNkampaniHub yasimahla
tags: Ukulandela ngokuzenzekelayoii-imeyile zokuthengisa ezininziinkampanihubCRMukwenza ingxelo ngokwesiko kweCRMinboxUkulandelela i-gmailodolocatshulwaiideshibhodi zokuthengisaUmbhobho wokuthengisa
I-PRISM: Inkqubo-sikhokelo yokuPhucula ukuGuqulwa kweendaba zakho zoLuntu
Athini amaxabiso aphakathi e-imeyile kunye nokucofa amaRhafu